Sarin-tsarimihetsika - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2021-03 > Sarin'ny tena
Ny asa be dia be nataon'ny mpanao hosodoko Rembrandt van Rijn (1606-1669) dia nanankarena tamin'ny sary hosodoko iray. Ny sary kely "Old Lehilahy manana volombava", izay tsy fantatra teo aloha ny mpamorona, dia azo lazaina mazava ho an'ny mpanakanto holandey malaza, hoy ny manam-pahaizana Rembrandt Ernst van de Wetering any Amsterdam.
Nampiasain'ny mpahay siansa ny sary hosodoko Rembrandt tamin'ny alàlan'ny teknikan'ny scanner efa mandroso. Gaga be izy fa nasehon'ilay scan fa nisy sary hosodoko hafa tao ambanin'ilay kanto - sary mety ho sarin'ilay mpanakanto taloha, tsy vita. Toa nanomboka tamin'ny sary-tena i Rembrandt ary avy eo nampiasa ny lamba mba hanoratany volombava ilay lahiantitra.
Ny tantara dia afaka manampy antsika hamantatra ny lesoka ataontsika amin'ny fiezahana hahatakatra an 'Andriamanitra. Ny ankamaroantsika dia nihalehibe ka nino fa Andriamanitra dia toy ny sary hita maso - lehilahy antitra misy volombava. Izany no fomba anehoan'ny mpanakanto ara-pivavahana an 'Andriamanitra. Tsy vitan'ny hoe mieritreritra an Andriamanitra ho antitra isika, fa toy ny fiainana lavitra sy mandrahona ihany koa, henjana sy hatezerana haingana rehefa tsy manaraka ny fenitra tsy vitany. Fa ity fomba fisainana an'Andriamanitra ity dia toy ny sary hosodokin'ny lahiantitra nafenina ny sarin-tena.
Milaza amintsika ny Baiboly fa raha te hahalala ny toetran’Andriamanitra isika, dia tsy tokony hibanjina afa-tsy amin’i Jesosy Kristy: “Jesosy no endrik’Andriamanitra tsy hita, ny Lahimatoa talohan’ny zavaboary rehetra.” ( Kolosiana. 1,15).
Mba hahazoana hevitra marina momba ny tena Andriamanitra, dia mila mijery ao ambanin'ny sosona hevitra malaza momba an'Andriamanitra isika ary manomboka mahita an'Andriamanitra nambara tao amin'i Jesosy Kristy. Rehefa manao izany isika dia hipoitra ny sary marina sy tsy miangatra momba an’Andriamanitra. Amin’izay isika vao mahafantatra izay tena hevitr’Andriamanitra momba antsika. Hoy i Jesosy: “Efa ela izay no nitoerako taminareo, ka tsy mbola fantatrao ihany aho, ry Filipo? Izay mahita ahy dia mahita ny Ray. Ary ahoana no ilazanao hoe: Asehoy anay ny rainy? (Jaona 14,9).
Jesosy irery ihany no mampiseho amintsika ny tena maha-Andriamanitra. Lavitry ny maha olona lavitra sy tsy lavitra azy izy fa nasehony fa Andriamanitra - Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina - dia tia antsika tsy misy fepetra. Andriamanitra dia tsy any an-danitra any ho any, fa tezitra amintsika ary vonona ny hamely sy hanafay. «Aza matahotra, ry ondry vitsy! Fa sitraky ny rainao ny hanome anao ny fanjakana” (Lioka 12,32).
Ny Baiboly dia milaza amintsika fa Andriamanitra dia naniraka an'i Jesosy ho amin'izao tontolo izao satria tiany izao tontolo izao - tsy hitsara ny olombelona fa hamonjy azy. «Ny Tompo tsy mitaredretra ny teny fikasana, araka izay heverin’ny sasany ho fahatarana; fa mahari-po aminareo Izy ka tsy tiany hisy ho very, fa mba hahitan’ny olona rehetra ny fibebahana.»2. Petrus 3,9).
Raha vao resy ireo soson’ny tsy fifankahazoana dia miseho ny endrik’Andriamanitra izay tia antsika mihoatra noho izay azontsika eritreretina. "Izay nomen'ny raiko ahy dia lehibe noho ny zavatra rehetra, ka tsy misy maharombaka izany amin'ny tanan'ny rainy" (Joannes) 10,29).
Amin'ny alalàn'i Jesosy no anehoana antsika ny tena fon'Andriamanitra ho antsika. Mahita azy amin'ny tena maha izy azy isika, tsy lavitra ary tsy tezitra na tsy miraharaha antsika. Tonga eto amintsika izy, vonona rehefa hitodika handray ny famihinana feno fitiavana, toa an'i Rembrandt aseho amin'ny sary hosodoko iray hafa, Ny Fiverenan'ilay Zanaka Adala.
Ny olantsika dia ny fombantsika manokana. Mampiasa ny lokonay izahay ary manao ny tsipikay manokana. Indraindray isika dia afaka manala tanteraka an'Andriamanitra amin'ny sary. Hoy i Paoly: “Isika rehetra dia mampiseho ny voninahitry ny Tompo amin’ny tsy misaron-tava, ary ovana araka ny endriny isika, ka ovana amin’ny voninahitra iray ho amin’ny voninahitra hafa, amin’ny alalan’ny Tompo, dia ny Fanahy.” (2. Korintiana 3,18). Eo ambanin’izany rehetra izany, ny Fanahy Masina dia manao antsika ho endrik’i Jesosy izay sarin’ny Ray. Rehefa mitombo ara-panahy isika, dia tokony hiharihary bebe kokoa io sary io. Aza avela hanakantsakana ny fijerinao ny momba an'Andriamanitra na ny fomba fiheveran'Andriamanitra anao ny sary hafa. Jereo Jesosy, izay irery no sarin’Andriamanitra, endrik’Andriamanitra.